यस वर्षको पूर्ण शान्ती पुरस्कार चन्दलाई, सर्वोत्कृष्ट अनुसन्धान अधिकृतमा सुवास कटुवाल - Dial 100 News
शनि, माघ १, २०७८
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले प्रदान गर्ने यस वर्षको पूर्ण शान्ती पुरस्कार विशेष ब्युरोमा कार्यरत प्रहरी नायव निरीक्षक कृष्ण बहादुर चन्दले पाएका छन्। नेपाल प्ररीको विशेष ब्यूरोमा कार्यरत उनलाई ६५ औं प्रहरी दिवसको अवसरमा सो पुरस्कारका लागि छनौट गरिएको हो।
यसैगरी यो वर्षको योगेन्द्र स्मृति पुरस्कार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा कार्यरत प्रहरी नायव निरीक्षक सागर राणले पाएका छन् । सर्वोत्कृष्ट अनुसन्धान अधिकृतमा महानगरिय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रहरी नायव निरीक्षक सुवास कटुवालले पाएका छन् ।
त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका एसपी बेलबहादुर पाण्डे उत्कृष्ट अनुसन्धान, डीएसपी दिप्ती कार्की उत्कृष्ट व्यवसायीक प्रहरी र नेपाल प्रहरी अस्पतालका एसएसपी डा. सञ्जय विक्रम श्रेष्ठ उत्कृट कोभिड व्यवस्थापक पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुदैँछन्।
पूर्ण शान्ती पुरस्कार पाउने चन्द को हुन् ?
कृष्ण बहादुर चन्दले २०५८ सालमा असईबाट नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए । उनले जोर्डनबाट (पोस्ट व्लास्ट ईन्भेष्टीकेसन) पिविआई को तालिम र चाईनाबाट भिआईपी सेक्युरिटि तालिम गरेका छन् । उनि नेपाल प्रहरीमा भर्ति भए देखि हाल सम्म नै विशेष ब्युरोमा नै कार्यरत छन् । विभिन्न क्षेत्रमा रहने विस्फोट घटनाको अनुसन्धानको कमाण्ड चन्दकै रहने प्रहरी अधिकृत बताउछन् । उनले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय आतंककारी संगठनहरुको थुप्रै अनुसन्धान गरेका थिए । नेपाल सरकारद्वारा प्रतिबन्धित विप्लव समुहका उच्च नेताहरुलाई पक्राउ गरेका थिए । ख्याती श्रेष्ठ अपराध पछि हत्याको अनुसन्धाम साथै काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा हुने बम व्लास्टका घटनाहरुको अनुसन्धाममा समेत उनको विशेष भुमेका रहेको थियो ।
को हुन् सागर राणा ?
अधिकांस समय २ नं प्रदेशको क्राईम डिभिजनमा रहेर तराईमा हुने अपराधिक कृयाकलापको अनुसन्धान गर्दे आएका सागर राण २ नं प्रदेशको अब्वल प्रहरी मानिन्छ । सप्तरीमा प्रहरीलाई दिउँसै गोली प्रहार गरी फरार रहेका प्रमुख योजनाकार दिपेन्द्र चौधरीलाई पक्राउ गरी ल्याउने क्रममा भाग्न खोज्दा मुठमेडमा चौधरीको मृत्यु भएको थियो जसको कमाण्ड राणले नै गरेका थिए । त्यस्तै बाराका पत्रकार विरेन्द्र वलीको हत्यारालाई र रौतहटका पुजारी राम शाहको हत्याकाण्ठका मुख्य योजनाकारलाई समेत राणले पक्राउ गरेका थिए ।
सर्वोत्कृष्ट अनुसन्धान अधिकृत कटवाल को हुन् ?
सर्वोत्कृष्ट अनुसन्धान अधिकृतको उपाधि पाएका सुवास कटवालले २०६० सालमा असईबाट नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए । उनले हालको अपराध महाशाखा र तात्कालीन केरकारमा धेरै समय काम गरेका थिए । पुर्व एआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारीले स्थापना गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो सिआईबीको स्थापनाकाल देखि नै उनि लामो समय सम्म सिआईविमा कार्यरत रहे । विशेष गरी आर्थिक अपराधको अनुसन्धानमा दख्खल राख्ने कटवाल सिआईविमा कार्यरत रहँदा थुप्रै आर्थिक अपराधका घटनाको अनुसन्धान गरेका थिए ।
उनि विशेष ब्युरोमा समेत केही समय कार्यरत रहेर हाल महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरको सादा पोसाकटोलि (सिभिल)मा कार्यरत छन् । कटवालले भिओआईपी कलबाईपासको पहिलो घटनाको अनुसन्धान गरेका थिए । सिआईविले हेरेको पहिलो बैङकीङ कसुर गोरखा विकास वैकंको अनुसन्धान उनैले गरेका थिए । उनले सर्वाधिक चर्चामा रहेका युनिटि ठगिको समेत अनुसन्धान गरेका थिए ।
दाङमा वैकंअफ काठमाडौका लुटपाटको घटनाको समेत सफल अनुसन्धान गरेका थिए । त्यस्तै उनले ललितपुरमा रहेर विप्लव समुहका ललितपुरका डिसिएम स्याम भन्ने सानु रााज बर्जाचार्यको साथबाट २९३ भन्दा बढी ग्रिनेट, कटुवा पेस्तोल र विभिन्न विस्फोटक पदार्थ सहित पक्राउ गर्न सफल भएका थिए । त्यस्तै उनले ललितपुरकै एल्लो हाउसबाट नेपालमा पहिलो पटक देखिएको ९५ ग्राम आईस ड्रगसहित बालाजु बस्ने मिलन घले गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो ।
६५ औँ प्रही दिवसको अवसर पारेर प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लाइफ टाइमअचिभमेन्ट पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
गुण्डा नाइके बिकास पुन पक्राउ